Madaxweynaha Soomaaliya oo Garoowe ku sii jeeda maalinta beri ah – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filaayaa in maalinta berito ah uu booqdo xarunta Dowlad goboleedka Puntland ee Garoowe halkaas oo la filaayo in isaga iyo Madaxwynaha maamulka Puntland C/raxmaan Faroole ay wada hadalo adag uu ku dhex maro.
Arrimaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadli doonaan labada dhinac ayaa loo badinayaa heshiisyadii dowlad goboleedka Puntland la gashey dowladii kmg aheyd iyo dhismaha maamulka Jubbaland State oo Puntland ay taageerto dhismihiisa.
Dhanka kale, sida ay warar xog-ogaal ahi sheegaayaan Madaxweynaha Soomaaliya ayaa marka uu Puntland ka soo laabto tagi doono magaalada Xeebta ah ee Kismaayo halkaas oo uu wada hadalo fool ka fool ah kulan yeelan doono maamulka kmg ee Kismaayo ka dhisan iyo dhamaan qeybaha bulshada ee deegaankaas, iyo weliba ergada ku howlan dhismaha maamul goboleedka Jubbaland.
Lama xaqiijin karo xiliga rasmiga ee uu Madaxweynaha Somalia mudane Xasan Sheekh ku aadan yahay magaalada Kismaayo laakiin waxaala filaayo in tagistiisa Puntland ee maalinta Axad iyo Isniinta ka dib ay noqon karto.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Uhuru Kenyatta oo wada kulmay (Daawo Sawirada)